Ogaden News Agency (ONA) – Daacish oo Laga Daad-Guraynayo Duleedka Dimishiq.
Daacish oo Laga Daad-Guraynayo Duleedka Dimishiq.
Posted by ONA Admin	/ May 21, 2018
Hay’ad la socota arrimaha dalka Syria ayaa sheegeysa in falaagada kooxda Daacish laga soo daadgureeynayo goobtii u dambeysay ee uu dagaalku ka dhacay ee magaalada Dimishiq, talaalbadan oo noqon doonta mid degaankaasi ku soo celisa xukunka dawladda.
Hay’addan la socota arrimaha dalka Syria oo fadhigeedu dalka Britain ayaa sheegtay in daadguraynta falaagada iyo qoysaskooda ee ka imaanaya xerada qaxootiga ee Yarmuk ee Falastiiniyiinta oo Syria ku dhextaalla ay bilaabtay Axaddii shalay ahayd.
Basas ayaa waxa ay falaagada iyo qoysaskooda u qaadayeen degaanka lama degaanka ah ku yaala bariga caasimadda dalka Suuriya. Wakaaladda wararka ee Reuters ayaa tabisay in goobtaasi ay ahayd halkii u dambeeysay ee ay gacanka ku hayeen kooxda Daacish, taas oo ku taala galbeedka dalka Suuriya.